မလွမ်းစကောင်းလွမ်းစကောင်း (ရှေးရှေးကမန်းတလေး အပိုင်း9) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မလွမ်းစကောင်းလွမ်းစကောင်း (ရှေးရှေးကမန်းတလေး အပိုင်း9)
မလွမ်းစကောင်းလွမ်းစကောင်း (ရှေးရှေးကမန်းတလေး အပိုင်း9)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 9, 2010 in Drama, Essays.. |5comments
မန်းလေးအကြောင်းရေးမယ်ဆိုရင် တစ်မြို့လုံးအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ ဘုရားတွေအကြောင်းမှ မပါဘူးဆိုရင်မပြည့်စုံဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။
တန်ခိုးအကြီးဆုံးနဲ့လူသိအများဆုံးလို့ပြောရရင်တော့ ရခိုင်ပြည်ကနေ ပင့်ဆောင်လာခဲ့တဲ့မဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော်ပါဘဲ။
ရန်ကုန်-မန်းလေး ရထားလမ်းပေါ်က မန်းလေးကိုဝင်ခါနီး ရှမ်းစု ဘူတာရောက်လို့ အနောက်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဲ ရွှေရောင်တွေပြောင်ဝင်းနေတဲ့
“မဟာမြတ်မုနိ” ဒါမှမဟုတ် မန်းလေး အခေါ်”ဘုရားကြီး”ကိုဖူးမြင်ရမှာပါ။
လမ်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် မြောက်ဘက်နေ တောင်ဘက်ကိုတည့်တည့်ကြီး လာတဲ့ 82လမ်းမက “ဘုရားကြီး”ရှေ့မှောက်မှာအဆုံးသတ်ပါတယ်။
“ဘုရားကြီး”ရဲ့ပုရ၀ုဏ်က တစ်ပြပါတ်ပါတ်လည် အကျယ်ကြီးပါ။
အရှေ့ဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင် 78လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မန်းလေးလမ်းမကြီးကနေလာရင် ပြတိုက်ကွေ့လို့ခေါ်တဲ့နေရာရောက်ရင် အနောက်ဘက်ကိုချိုးဝင်လိုက်တာနဲ့ ဘုရားကြီး အရှေ့စောင်းတန်းကို ရောက်ပါတယ်။
အဲဒီလမ်းကတော့ တစ်လမ်းမောင်းပါ အရှေ့ကနေ အနောက်ကို ဘဲသွားလို့ရပါတယ်။
(အရင်ကတော့ ဒီလမ်းက စက်ဘီးတစ်စီးစာသာ သွားလို့ရတဲ့ လူနေအိမ်တွေနဲ့ပိတ်နေတဲ့ ကျပ်ညပ်နေတဲ့လမ်းပါ။
အခုခေတ်မှသာ လမ်းဖောက်လိုက်တဲ့အတွက် ကောင်းကောင်းသွားလို့ရတဲ့လမ်းဖြစ်သွားတာပါ)
အနောက်ဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးချိုနာရီစဉ်ကြီးရှိတဲ့ 84လမ်းကနေ တောင်ဘက်ကိုတည့်တည့်လာ ဘုရားကြီးလေးဆယ့်ငါးတာနားက သာသနာ(2500)ဗိမ္မာန်နားမှာရှိတဲ့စာတိုက်ကွေ့ဆိုတာကိုရောက်ပြီဆိုရင် အပေါ်တဲ့တဲ့တက်လိုက် (ဒီလမ်းကလဲ တစ်လမ်းမောင်းဘဲ အနောက်ကနေအရှေ့ဘက်ကိုဘဲသွားလို့ရပါတယ်)
ဘုရားကြီးက အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် လေးဘက်လေးတန် စောင်းတန်းတွေရှိပါတယ်။
အစည်ကားဆုံးကတော့ အရှေ့ဘက်နဲ့ မြောက်ဘက်စောင်းတန်းပါဘဲ။
မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ရဲ့အံ့ထူးမကုန်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ စာမဖွဲ့တော့ပါဘူး။
မဟာမြတ်မုနိဘုရားရဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းက အခန်းတစ်ခုထဲမှာရခိုင်ပြည်ကပါလာတယ်ဆိုတဲ့ လူပုံစံကြေးရုပ်ကြီးတွေ၊ဧရာဝဏ်ဆင်ပုံစံကြေးရုပ်ကြီးတွေ
ရှိပါတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းက အဖွားနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်အဲဒီကြေးရုပ်ကြီးရဲ့ခေါင်း မျက်စေ့ ၀မ်းဗိုက် ခြေထောက်အစရှိတဲ့နေရာတွေကို
လက်နဲ့ပွတ်ခိုင်းပြီး “ခေါင်းမကိုက်ပါစေနဲ့ မျက်စေ့မနာပါစေနဲ့ ဘိုက်မနာပါစေနဲ့ ခြေထောက်မနာပါစေနဲ့”ပါးစပ်ကလည်းရွတ်လို့ဆုတောင်းခိုင်းပါတယ်။
လူကြီးကချီထားပေးပြီး မမှီမကမ်းနဲ့သာ ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာပွတ်ရတယ် စိတ်ထဲကတော့ကြောက်ပါတယ်။
ကြောက်ဆို လူတွေပွတ်လွန်းလို့ပြောင်လက်နေတဲ့အပြင် မျက်စေ့နေရာကဟောင်းလောင်း ၀မ်းဘိုက်ကချက်နေရာကဟောင်းလောင်း လက်တစ်ဖက်ကပြတ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ ကလေးဆိုတော့လဲကြောက်တာပေါ့ဗျာ။
ဒီအရုပ်တွေရဲ့ဘေးမှာတော့ အလွန်ကြီးမားသော နတ်သားနှစ်ပါးကထမ်းထားတဲ့ ကြေးစည်အကြီးကြီးရှိပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ကျနော်7တန်းနှစ်လောက်မှာမှ လှူထားတာပါ။
အဲဒီကြေးစည်ကြီးအတွက်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လာလှူတဲ့ ကြေးတွေကို အရည်ကျိုပြီး ပုံစံလောင်းတာက ဘုရားကြီးအရှေ့ဘက်စောင်းတန်းက ဆိုင်ခန်းတွေရဲ့နောက်ကျေဘက်မှာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
မြေကြီးထဲမှာတွင်းတူး ပြီးပုံစံလောင်းတာကိုတော့ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
ဘုရားကြီးမှာရောက်တယ်ဆိုရင် ငယ်ငယ်က တမက်တမောနဲ့ လူကြီးတွေကို အ၀ယ်ခိုင်းရတာကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာကစားစရာ ” လင်းကွင်း”လေးတွေ”ဗုံ “လေးတွေ “အိုးစည် “လေးတွေပါ။
အိုးစည်ဆိုတာက တီးစရာသားရေမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်တည်းဘဲပါတဲ့ လည်ပင်းရှည်ရှည်လေးကိုခေါ်ပြီး ” ဗုံ”ဆိုတာကတော့ သားရေမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ကကြီးပြီး
ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေက ဒါတွေဝယ်ပေးလိုက်လို့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ အိမ်နီးနားချင်းကလေးတွေစုပြီး ဗုံတွေလင်းကွင်းတွေ အိုးစည်တွေနဲ့ ပေါက်တတ်ကရသီချင်တွေဆို တီးချင်တာတွေတီးပြီး ကတမ်းခုန်တမ်းကစားကြတာကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
အခုလိုတိုးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကလေးတွေက တီဗွီဂိမ်းလောက်ဘဲ ဆော့နေတာမြင်တော့ မြန်မာ့ကစားစရာကို နောင်မှာမြန်မာကလေးလေးတွေက မမက်တော့မှာကိုစိုးပါတယ်။
လူကြီးတွေဆီက ပိုက်ဆံတောင်း လိပ်စာရောင်းတဲ့ဆီမှာပေါက်ပေါက်ဆုပ်တို့ ကန်စွန်းရွက်တို့ဝယ် လိပ်ကန်ထဲကိုပစ်ချ လိပ်တွေငါးတွေလာစားရင်
ကလေးအချင်းချင်း အော်ဟစ်လို့ သူထက်ငါ ဟိုမှာဒီမှာဆိုပြီးလက်ညိုးတထိုးထိုးနဲ့ပြကြ သိပ်ပျော်ခဲ့ရပါတယ်။
(ဒီကန်မှာရောင်းတဲ့လ်ိပ်စာကို အစွဲပြုလို့ မသိသူက အိမ်လိပ်စာမေးရင် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်နဲ့ကန်စွန်းရွက်လို့ပြန်ဖြေပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ဟာသလုပ်တတ်တာ မန်းလေးသူတွေပေါ့)။
နောက်ဘုရားကြီးမှာ အနီးအနားက ဘုရားကြီးသူတွေရော အဝေးက ဧည့်သည်တွေပါနေ့စဉ်ကုသိုလ်ယူစရာအလုပ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
နံက်တိုင်းမျက်နှာသစ်တော်ရေဆပ်ကပ်တဲ့အခါအမွှေးနံ့သာအဖြစ်အသုံးပြုမယ့် သနပ်ခါးတွေကို ကျောက်ပြင်ကြီးတွေနဲ့သွေးနေတာကို
အဲဒီနေရာကတော့ မြောက်စောင်းတန်းရဲ့အရှေ့ဘက် က ကုက္ကိုပင်ကြီးအောက်မှာပါ။
ဘုရားကြီးထဲလာရင်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ မျက်နှာသစ်တော်ရေထည့်ထားတဲ့ပုလင်းလေးရယ် မျက်နှာသစ်တော်ကျလို့ယူဆရတဲ့
တဘက်ကလေးတွေကိုခပ်တည်တည်လက်ထဲဇွတ်လာထည့်ပြီးနောက်မှ ပိုက်ဆံတောင်း လို့ရောင်းတတ်တဲ့သူတွေကိုပါ။
ဘုရားကြီးရဲ့လေးဘက်လေးတန်က စောင်းတန်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေကတော့အများအားဖြင့် “နိဗ္ဗာန်ကုန်” လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းရောင်းချတာများပါတယ်။
ု့ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ၊ စိတ်ပုတီးတွေ၊ သာသနာ့အလံတွေ၊
ယကြာချေတဲ့နေရာမှာ သုံးကြ တဲ့ တံခွန်ကုက္ကားတွေ ထီးဖြူတွေရွှေထီးတွေငွေထီးတွေကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါကပေါ့ဗျာ ရန်ကုန်ကိုကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရယ်ကျနော်ရယ်ပေါင်းသုံးယောက်ဘုရားကြီးကိုသွားကြပါတယ်။
ဘုရားဖူးပြီးတဲ့အခါမှာ ဘုရားကိုလက်ယာရစ်ပါတ်ရင်း ဗေဒင်ဟောခန်းနားရောက်တော့ ဟိုဗေဒင်ဆရာကလဲခေါ် ကျနော်တို့ထဲကတစ်ယောက်ကလဲမေးချင်ဆိုတော့
ဗေဒင်ဆရာက ကျနော့်သူငယ်ချင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာအိမ်တောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မန်းကျည်းပင်က မြောက်ဘက်ထွက်နေတိုင်းကိုင်းကို ခုတ်လိုက်ပါတို့။
မကြာခင်ကာလက ခြေနှစ်ချောင်းထွက်ခဲ့မယ်တို့ အိမ်ရဲ့အရှေ့ဖက်အရပ်က မနာလိုလို့ရန်ပြုတဲ့သူရှိမယ်တို့ ဟောတဲ့ပြီးယတြာချေခိုင်းပါတယ်။
သူစီရင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အင်းချထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို ယတြာချေတဲ့အခါမှာထွန်းးဘို့ ဆိုပြီး ရောင်းလိုက်ပါတယ် ။ဗေဒင်ဟောခနဲ့ ဖယောင်းတိုင်ဘိုးက
သိပ်တော့မများပါဘူး နှစ်ဆယ်ငါးကျပ်ထဲပါ။အဲဒီတုန်းကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှ တစ်ကျပ် ပါ။
ဒါနဲ့ဘဲသူ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဗေဒင်ဆရာဟောတာ ကွက်တိကို မှန်တဲ့အကြောင်းတွေကို သူ့အိမ်ကိုပြန်ပြောတာပေါ့။
သူပြောပြီးမှ သူ့အမေက ဗေဒင်ဆရာက နည်းနည်းလေးဝမယ် အသက်သိပ်မကြီးသေးဘူး မေးမှာ ၀င်းဦးလိုမေးမွှေးလေးရှိလားလို့မေးတဲ့အခါ ဟုတ်တယ်လို့လဲပြန်ဖြေရော “အ တဲ့ကောင်ခံရတာ နည်းတောင်နည်းသေးတယ် မှန်မှာပေါ့ အဲဒါဟိုဘက်နှစ်အိမ်ကျော်ကနေပြောင်းသွားတဲ့ မောင်ညို “လို့ပြောလိုက်ရော
အားလုံးက ၀ါးကနဲရီလိုက်ကြတော့ ခံလိုက်ရတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။
နောက်ဘုရားကြီးမှ ကောင်းတာတစ်ခုက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွှေသင်္ကန်းကပ်နိုင်တာကိုပါ။
ကျနော်တို့မန်းလေးက တော့ ရွှေချတယ်လို့ဘဲသုံးပါတယ်။
ရင်ဘတ်မနာအောင် ရင်ဘတ်တော်ကိုရွှေချ ၊နှလုံးမနာအောင်နှလုံးတော်နေရာမှရွှေချ ၊လက်မနာအောင်လက်မောင်းတော်နေရာမှာရွှေချ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ်ကတော့ဟုတ်နေပါတယ်၊
ဒါပေမယ့်လည်းရွှေချတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းချလို့တော့မရပါဘူး။ရွှေချလို့ရနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေမှ စစ္စည်းအညိုလေးတွေသုတ်ပေးထားပါတယ်။
အဲဒီနေရာမှာရွှေချမှလည်း ရွှေက ဘုရားကိုယ်တော်ပေါ်မှာစွဲမြဲစွာကပ်နေနိုင်မှာပါ။
စံနစ်တကျ စစ္စည်းသုတ်ပြီး ပုံစံပြလို့ဘဲပြောပြော ဘုရားတန်ခိုးတော်ကြောင့်ဘဲပြောပြော နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရွှေဆိုင်းပေါင်းများစွာကပ်လှူနေတာတောင်
မဟာမုနိဘုရားကြီးရဲ့မျက်နှာတော်နဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်တော်တို့က အချိုးအစားညီလို့လိုက်ဖက်တင့်တယ်သပ္ပါယ်နေတုံးပါဘဲ။
ဘယ်လောက်ဘဲ စိတ်တွေညစ်လာလာ ထွေလာလာ ပူလာလာ မဟာမြတ်မုနိကိုယ်တော်မြတ်ရှေ့ရောက်လို့ ဦးနှိမ်ကန်တော့ပြီးဖူးမျှော်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ စိတ်ထဲမှာ အနည်းနဲ့အများ ငြိမ်းချမ်းလို့သွားတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။
(တစ်ခါတစ်ရံစိတ်ညစ်ရတာကတော့ ကြက်တူရွေးတော်တော် မယ်ဘော်က ကဲဆိုသလိုပါဘဲ ဘုရားလာဖူးမယ်ဆိုတဲ့ VIP ကဘယ်နေမှန်းတောင် မသိဘူး
ဒီမှာက ဘုရားဖူးတွေကိုဟိုနားမဖူးရ ဒီနားမ၀င်ရဆိုပြီး ကန့်သတ်လို့ထားတာပါ။ကျနော်ကတော့ ဘုရားလာလို့ အ၀င်ဝမှာကော်ဇောခင်းထားတာမြင်ရင် လှည့်ပြန်လိုက်တာပါဘဲ။အဲဒီနေ့က VIP လာမယ့်နေပါဘဲ)။
ဘုရားကြီးမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ ဘုရားပါတ်ပါတ်လည်က ပြတိုက်လေးတွေမှာ လူတွေလှူဒါန်းထားကြတဲ့ပစ္စည်း လေးတွေကိုပါ။
ဆံပင်တွေ ပိုက်ဆံတွေ ကွယ်လွန်သွားသူရဲ့ဓါတ်ပုံတို့လက်ဝတ်ရတနာတို့ကို (ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့မောင်ဘယ်သူ မဘယ်သူကိုရည်စူး၍ဆိုတဲ့)စာလေးတွေကပ်ပြီးလှူထားတာတွေကိုလိုက်ဖတ်ရတာကိုက ၀တ္ထုတပုဒ်ကို ဖတ်နေရသလိုပါဘဲ။
တစ်ခါကတော့ တောင်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ပြတိုက်ထဲကိုခေါင်မိုးကိုဖောက်ပြီးသူခိုးဝင်လာတာ အုဌ်နံရံမှာ သူခိုးခြေရာကြီးကျန်နေတာကို မဖျက်ဘဲထားတာကိုတွေ့ဘူးပါတယ်။
အဲဒီပြတိုက်တွေထဲမှာ ရှေးက ၀န်ကြီတွေရဲ့အ၀တ်အစားတွေ ပုံတူတွေရှိတာကိုတော့မှတ်မိလို့နေပါတယ်။
ဘုရားကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ ပိဋကတ်တော်တွေကို ပေစာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ပေစာတိုက်ရှိပါတယ်။
အနောက်တောင်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့ရေသပ္ပါယ်တဲ့နေရာရဲ့အနောက်နားက အမြဲတမ်သော့ပိတ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲမှာ
ကျောက်စာတွေကို မြင်ဘူးပေမယ့် ဘာအတွက်ရေးထိုးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ၀င်မကြည့်ရလို့မသိခဲ့ရပါဘူး။
ဘုရားကြီးရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာတော့ မဟာမုနိဘုရားကို ပင့်ဆောင်လာပုံ ပန်းချီကားတွေကလဲ အသက်ဝင်လှပါတယ်။သူ့ရှေ့မှာတော့ နောင်-ဒိုင်းဆိုပြီးအချက်ပေးနာရီသံကို တီးခတ်ဘို့ ဆယ်ငါးပေလောက်အမြင့်မှာ စင်နဲ့တင်ထားတဲ့ စည်ကြီးကလဲ ခန့်ခန့်ထည်ထည်ပါ။
အဲဒီနေရာကနေမြောက်ဘက်ကို ဆက်လျှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓ၀င်ပြခန်းရှိပါတယ်။
မဟာမြတ်မုနိဘုရားရဲ့အရှေ့ဘက်စောင်းတန်းအလယ်လောက်နေပြီးတောင်ဘက်ကို ထွက်လို့ လမ်းကလေးကိုကူးမယ်ဆိုရင် အာလိန်ငါးဆင့်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တည်ထားတဲ့ အာနန္ဒာဘုရားကိုဖူးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုရားကလဲ ကပ်ကျော်ဘုရားလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဘုရားကြီးကိုသာလာကြတယ် အာနန္ဒာဘုရားဘက်ကို ကူးပြီးလာဖူးသူကနည်းလို့ပါ။
ဘုရားကြီးရဲ့တောင်ဘက်စောင်းတန်းကထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြီးမားခိုင်ခန့်တဲ့ မဟာရမ်အုတ်တံတိုင်းကြီးတွေ မုဒ်ဦးတွေနဲ့ခန့်ထည်လှတဲ့
ရှေးကတည်းက တည်ရှိနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အနောက်ဘက်ကိုဆက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေကို အထိမ်းအမှတ်ကျောက်ပြားတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ မြန်မာတင်မက က မ္ဘာကပါသိတဲ့ နာမယ်ကျော် ကျောက်ဆစ်တန်းကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်တွေကိုကျော်လွန်လို့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါ အခုနောက်ပိုင်းမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကုန်းကျော်တံတားဘေးမှာ
မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲမှာတုန်းက စုရပ်အဖြစ်အသုံးချခဲ့ နာမယ်ကျော် ” ဦးပွားဘုရား”ကိုရောက်မှာပါ။
ဒီဘုရားကို အမှတ်သညာပြုလို့ ဘုရားဘေးမှတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကုန်းကျော်တံတားကိုတောင် ကျနော်တို့က ” ဦးပွားကုန်းကျော်”လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
************************ ****************************** *****************
မန်းလေးမြို့မှာ မဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော် ဒါမှမဟုတ် ဘုရားကြီးကတော့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်.။
မန္တလေးတောင်တော် ကတော့ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးတောင် ပေါ်ကို မရောက်ဘူးဘူး ဆိုရင် မန်းလေးသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်၊
အရင်ကတော့ မန်းလေးတောင်ကိုတက်ရင် ခြင်္သေ့ကြီးနှစ်ကောင်ရှိတဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းစောင်းတန်းကနေတက်ကြတာများပါတယ်။
တချို့တစ်လေကျတော့လဲ အခုရွှေမန်းတောင်ဂေါက်ကွင်းရှိတဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတက်ကြပါတယ် လမ်းကတော့တောလမ်းပါ။
အရှေဘက်က အင်ကြင်းတောဘက်ကတက်ရင်လဲရပါတယ် သူကတော့တောလမ်းသက်သက်။
အဲဒီလမ်းကိုတော့ မန်းလေးတောင်ပေါ်ကိုလာကဲတဲ့ အတွဲတွေကိုချောင်းတဲ့သူတွေဘဲအသုံးများပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ မန်းလေးတောင်ကို ကားတက်လမ်းဖောက်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းက အတက်လမ်း အရှေ့ဘက်လမ်းကတော့အဆင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အတက်လမ်းက သိပ်မမတ်ပေမယ့်တစ်ဆစ်ချိုးကွေ့လေးတွေကတော့ မတ်စောက်ပြီး တက်ရတာနည်းနည်းလေးခက်ပါတယ်။
အဆင်းလမ်းမှာရောအတက်လမ်းမှာပါ “ချောင်ကြိုက်တဲ့”အတွဲများက နေ့ရောညပါရှိနေတတ်ပါတယ်။
ညဆိုရင်ပိုများတတ်ပါတယ် များဆိုမှောင်လဲမှောင် လူလည်းပြတ်တာကိုးဗျ အဲ့တော့ ကဲလိုကဲ သဲလိုသဲ စိတ်တိုင်းကျပေါ့။
ကျနော်ကတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ ညပိုင်းမှာ မကြာခဏရောက်တတ်ပါတယ် မန်းလေးတောင်ပေါ်က ညရူ့ခင်းက တော်တော်လေးလှပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကကြည့်ရင် နေရာကွက်ကြားမီးလေးတွေလင်းနေတာကို က ကဗျာဆန်တာကိုးဗျာ။
ကွက်ကြားလင်းရတာကတော့ လျှပ်စစ်မီးက အလှည့်ကျခွဲတမ်းနဲ့သုံးရတာကိုး။
နေ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့ တစ်မြို့လုံးကို စီးမြင်ရတဲ့အလှက ဘာနဲ့မှမတူပါဘူး။
တောင်ပေါ်ကလှမ်းကြည့်ရင်ထူးခြားတယ်ဆိုတဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ မန်းလေးတောင်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ “အိုးဘိုထောင် “ပါ။
အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင် ဘုရာလေးတစ်ဆူရှိမယ် သူ့နဲ့ဘေးမှာတော့ အထဲမှာနေသူတွေက အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်ကို အလွယ်တကူ ခွဲလို့မရအောင် ညီညီညာညာမဟုတ်ဘဲ ကန့်လန့်တိုက်ဆောက်ထားတဲ့ ထောင်သားတွေနေတဲ့ထောင်အဆောက်အဦးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
(အရင်က မန်းလေးထောင်ဆိုတာ နန်းတွင်းအနောက်ဘက်ခြမ်း မတ္တရာကိုသွားတဲ့ရထားလမ်းဘေးမှာရှိတာပါ အခုနောက်ပိုင်းမှ အိုးဘိုကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။)
မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ရာသီဥတုသာယာလို့ ကြည်လင်တဲ့နေ့များမှာဆိုရင် “မယ်ဥတောင် လို့ခေါ်တဲ့ သခင်မတောင်တော် “
ဟိုးခပ်ဝေးဝေး မှာ မူန်ပြပြဘဲမြင်ရတဲ့ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးရဲ့အုဌ်ဖိနပ်တော်
တောင်ဘက်ခြမ်းကနေ ငုံ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ခုနောက်ပိုင်းခေတ်သစ်လက်ရာဖြစ်တဲ့ မန်းလေးမြို့ရဲ့ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်ဟိုတယ် “နိုဘိုတယ်တစ်ဖြစ်လဲ မန်းလေးရီဆော့ “။
ဆက်ပြီးလှမ်းကြည့်ရင် ကျုံး မြို့ရိုးနဲ့ နန်းတွင်ထဲက သစ်ပင်တောအုပ်ကလေး။
အရှေဘက်မှာတော့ ရှမ်းရိုးမ နဲ့အောင်ပင်လယ် ရန်ကင်းတောင် အပါအ၀င် ရူ့မဆုံးတဲ့လယ်ကွင်းပြင်။
ငယ်ငယ်ကတော့ မိဘတွေနဲ့မန်းလေးတောင်ကို လာရင် ဦးခန္တီဆိုတဲ့ရသေ့ကြီးက မန္တလေးတောင် ကို ပြုစုပျုိးထောင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ရသေ့ကြီး နာမယ် အစွဲပြုလို့မှည့်ထားတဲ့ ဦးခန္တီဇရပ် လို့ခေါ်တဲ့အလယ်ပစ္စယံမှာ ထမင်းချိုင့်တွေကို အစောင့်နဲ့ထား။
ကလေးတွေက သူအရင်ရောက်ငါအရင်ရောက် အပြိုင်အဆိုင်အော်လို့ပြေးတက်၊လူကြီးတွေကလဲမှာပြုမှ စိတ်မချလို့နောက်ကလိုက်
တောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ တစ်ယောက်တစ်နဲ့တစ်ယောက်ကိုယ်သိတဲ့နေရာကိုလက်ညိုးထိုးလို့ ဒါကဘယ်နေရာ ဟိုဟာကဘာကြီးဆိုပြီး ဟုတ်တာမဟုတ်တာအပထားစကားနိုင်လုလို့ငြင်းကြခုံကြနဲ့ ကြွက်ကြွက်ညံပါဘဲ။
အခုလိုမန်းလေးတောင် မှာ ကားတက်လို့ ဆိုင်ကယ်တက်လို့ရအောင် တည်ဆောက်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရတဲ့လူတွေ အချိန်မရသူတွေအနေနဲ့တောင်ပေါ်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူရောက်နိုင်လို့ပါဘဲ။
ဒါပေမယ့်ဒါတွေက အခါကြီးရက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ လူစည်ကားတဲ့နေ့တွေမှာ သာဖွင့်ပေးပါတယ်။
တော်တော်လေးကိုမတ်မတ်ကြီးတက်သွားရလို့ပါ။နောက်ပြီးသူက အတက်သက်သက်အတွက်ဘဲသုံပြီး အဆင်းကတော့ ဓါတ်လှေကားကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
မန်းလေးတောင် တောင်အဆင်းလမ်းတ၀က်လောက်မှာ ထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
လဲကျသွားတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကို အမြစ်ဆုံကနေပြီးတော့ ထိုင်တော်မူဘုရားတစ်ဆူထုလုပ်ထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အဆင်းလမ်း မန်းလေးတောင်အရှေ့ဘက်က ပါတ်လို့ဆင်းပြီးရင် ကျောက်တော်ကြီးဘူရားရှေ့ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မန်းလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ဖျားနဲ့ မြောက်ဘက်ဖျားမှာ စံပ္ပါယ်တော်မူနေ့တဲ့ မြို့ကျက်သရေဆောင် မြို့အထိမ်းအမှတ် မန်းလေမြို့ရဲ့အသဲနှလုံးလို့ဆိုရင်လဲ
ကယ်တင်သူများကြောင့်စိုပြေစိန်းလန်းလို့နေပြီး နွေအလှ မိုးအလှ ဆောင်းအလှ မတူသောရသတွေကို ပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ မန်းလေးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မန်းလေးမှာ လှည့်ဖူးစရာ ဒါအကုန်ဘဲလားလို့ မေးများမေးရင် မန်းလေးသူ အဆိုတော်ကြီး “မစိမ်းစိမ်း”ဆိုထားခဲ့တဲ့ “ရွှေမန်းဆီသို့”သီချင်းလေးထဲမှာပါတဲ့စာသားလေးကတော့
” ‘ဒါတွေစုံပါပြီ မြို့တွင်းကိုလှည့်မည်”ဆိုထားတဲ့အတိုင်း ဘုရားဖူးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်……………………………………………………………………….
ဟိုးအရင် ရွှေမန္တလေး ကို တစ်ကယ်ကို လွမ်းပါတယ်။
ကိုပေါက်အရေးကောင်းလို့ လာလည်ချင်စိတ်ပေါက်ရင် …ဧည့်ခံရမှာနော
ဘာလိုလိုနဲ့ မန္တလေး နှစ် ၁၅၀ တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီနော်………. ပြောတဲ့အတိုင်း ဧည့်ဝတ်မကျေလို့ကတော့ တွေ့မယ်။ ထီထိုးလိုက်ဦးမယ်နော်။ ထီပေါက်တဲ့နေ့ မန်းလေး တက်လာခဲ့မယ်။ မန်းလေးတောင်ရယ်၊ ဘုရားကြီးရယ်၊ ရန်ကင်းတောင်ရယ်… များကြီး သွားချင်လိုက်တာ။